Saturday, December 29, 2007 Sọnde, Septemba 20, 2015 Douglas Karr
Ozizi Newton banyere gravitation na-ekwu na ike dị n'etiti oke mmadụ ga-adabara na ngwaahịa nke igwe mmadụ abụọ ahụ yana ọ dabara na square nke anya n'etiti ndị ahụ:
A kọwara Ozizi Ike ndọda:
F bụ ịdị ukwuu nke ike ndọda n'etiti isi ihe abụọ.
G bụ ike ndọda mgbe niile.
m1 bụ uka nke mbụ mgbe uka.
m2 bu uka nke abuo uka.
r bu uzo di n’agbata uzo mmadu abuo.
Theory metụtara na Web:
F bụ ike nke ike achọrọ iji bulie ogo njin ọchụchọ gị.
G bụ (Google?) mgbe niile.
m1 bụ ewu ewu na ebe nrụọrụ weebụ gị.
m2 bụ ewu ewu na weebụsaịtị ị chọrọ ijikọ gị.
r bụ ebe dị anya n’agbata ebe nrụọrụ weebụ abụọ ahụ.
Nchọgharị ọchụchọ na-enye mgbe niile na-ekpebi ịdị ike nke ike dị n'etiti weebụsaịtị abụọ. Site na ịmepụta algorithm dị mgbagwoju anya nke PageRank na incorporates azụ njikọ, ikike, ewu ewu na ọbụna recency, na search engines ịchịkwa mgbe nile.
Cheedị ebe Google bụ telescope na-achọ mbara ala ndị kasị ukwuu na blogosphere bụ mbara igwe.
Amaghị m ma ọ bụrụ na Larry Page ('Page' na PageRank) na Sergey Brin mere ihe yiri nke a site na nkuzi Newton mgbe ha mepụtara algorithm (s) bụ isi nke na-ebu Google Igha. Ghọta tiori a ma tinye ya na weebụ bụ otu ụzọ ị ga-esi lee anya na Ngini Ngini Ngini, ọ bụ ezie. Nakwa, echere m na ọ bụ naanị ihe na-adịghị mma na enwere ike ịbịakọta ya.
Ya mere - ọ bụrụ n’ịchọrọ ị nweta ọkwa ka mma na Nchọgharị Nchọgharị, nzọ kachasị mma gị bụ ịchọta saịtị ndị ọzọ na-aga nke ọma na isiokwu ndị dakọtara wee hụ ma ị ga-enweta uche ha. Ọ bụrụ na ha elebara gị anya, ike a na-etinye n'ọrụ ga-eme ka ị bịarukwuo ha nso. Blọọgụ nwere nnukwu mmadụ (bụ R PageRanks) nwere ike ịdọta obere saịtị ndị ọzọ.
Ndị na-ere Ngini Nchọpụta matara Theory
Linksgwọ njikọ dị ugbu a ma ewu ewu ma n'okpuru Google. Google na-enyocha njikọ ndị akwụ ụgwọ dị ka ihe na-akpata nsonaazụ ọchụchọ na-arụ ọrụ ma na-adọta saịtị na, ma eleghị anya, ekwesịghị ya. Ọtụtụ ndị na-ede blọgụ (tinyere m) h itr as ya ka caph cap ikike nke ike ha nwetara site n 'ithit ha.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kwa ụbọchị ana m enweta onyinye site na azụmaahịa ndị ziri ezi na-achọ ịkwalite saịtị m iji dọọ nke ha nso. Enwere m ezigbo mma, n'agbanyeghị. Ruo ugbu a agbanyeghị m $ 12,000. Nke ahụ nwere ike ịdị ka nnukwu ego ịhapụ, mana ihe egwu dị na m bụ ịgba akwụna na blọọgụ m na Google tụbara m n'ụlọ mkpọrọ ( ndeksi).
Na nnukwu foto, edoghị m nke ahụ anya Google nwere ike imeri ugwo njikọ fiasco. Ọ dị ka ụfọdụ ndị na-etinye iwu nke ike ndọda yana Google na-anwa ịlụ ọgụ megide iwu nke okike.
Ndị Microsoft Guys amaka!
Ọ kpalighị nke a, mana ka m nyochachara ọkwa a, achọpụtara m Microsoft tọhapụrụ a Ihe osise nke gravitation maka weghachite ozi akwụkwọ na August 2005. Mmasị.
Tags: bingndọdamicrosoftpeeji nkepeeji nke algorithmogoA